SAWIRRO: Xasan Afgooye, Macaani, Bile, iyo Xasan Siidoow oo kasoo dhex muuqday tababarka kooxda Dekedda ay isugu diyaarineyso xilli ciyaareedka soosocda – Gool FM
SAWIRRO: Xasan Afgooye, Macaani, Bile, iyo Xasan Siidoow oo kasoo dhex muuqday tababarka kooxda Dekedda ay isugu diyaarineyso xilli ciyaareedka soosocda
jilacow July 11, 2016
(Muqdisho) 11 Luulyo 2016- Kooxda kubadda cagta ee Dekedda ayaa si rasmi ah u bilaawday tababarkii ugu horeyeeyay oo ay isugu diyaarineyso horyaalka heerka koowaad ee furmi doona dabayaaqada sanadkan.
Dekedda ayaa sanadkaan lasoo wareegtay ciyaaryahano dhowr ah oo ay ka keensatay Elman, Iyo Saxafi fc, oo qeyb ka ah kooxaha Soomaaliya laga qadariyo.
Macalinka hogaamiya Kooxda Dekedda Cabdi Joon oo la hadlay Gool FM ayaa yiri” xilli ciyaareedka furmi doono waxaan dooneynaa in aan ku guuleysano horyaalka soomaaliya, Dekedda waa koox awood badan waxaana jooga ciyaaryahano badan oo tayo leh, waxaan la soo wareegnay dhoor ciyaaryahan oo aan rabno in aan ku shir tagno xilli ciyaareedka billaaban doono.
Ciyaaryahanada Axmed Xasan Macaani, Xasan Afgooye, Xasan Siidow Hiloowle iyo Bile Muxudiin Buraale oo qeyb ka ah Saxiixyada cusub ee kooxda ayaa kazoo dhex muuqday tababarkii saakay.
Sikastaba tan iyo markii uu qabtay xilka tababaranimo ee kooxda Dekedda macallin Cabdi Joon ayaa naadiga waxaa laga dareemay is bedel weyn iyadoo sanadkii lasoo dhaafay naadiga ay kaalinta labaad ka gashay horyaalka Soomaaliya.
W/D: Cabdi Fitaah Cabdi Rashiid Nani
Xuquuqda Sawirrada:Gool FM.
“Ula kac uma dhaawicin, dabeecadeydana ma ahan inaan qof xun ku noqdo garoonka.”. Payet oo ka hadlay dhaawicii uu u geystay CR7
Xiliga Lionel Messi uu katagi doono Barcelona oo la ogaaday (Waa Goorma, maxaase ku riixaya?)